Blog of Nyein Chan Yar: weekend poetry
ပျက်စီးခြစားနေတဲ့ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစား၊
ထင်ရာစိုင်း ရူးသွပ်နေဆဲ အာဏာရှင်၊
ငါတို့တွေဟာ ဒီဖိနှိပ်မှုရဲ့ ထောင်ထဲမှာ
ငါတို့ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှာ လှောင်ပိတ်ဖို့မလိုဘူး
ဘက်ပေါင်းစုံမှာ မင်းလို မကောင်းဆိုးဝါးတွေ။
နူနာစွဲသလို မင်းတို့ရဲ့ အသားထဲမှာ ယုတ်မာမှုတွေ။
မင်းရဲ့ အသားထဲက တရွရွ တက်လာတဲ့ အပုတ်နံ့ကို ငါရတယ်။
မင်းဟာ ဒီလေထုကို အဆိပ်ခတ်သတ်ခဲ့တယ်။
မင်းဟာ အမျိုးသားရေးကို မတရားကျင့်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။
မင်းရဲ့ မိစ္ဆာအမိုက်မှောင်ကို ခွဲယူ ဖေါက်ထုတ်
မင်းကိုမကောင်းဆိုးဝါးတွေ ပူးကပ် ဖျားနာနေတာကို
ငါတို့ပြည်သူလူထုရဲ့ ဒုက္ခတွေ ဖြန့်ပြ၊
မင်းကို အမှန်တရားတွေနဲ့ လွှမ်းခြုံပေးပြီး၊
Posted by dathana at Sunday, September 02, 2007
Labels: Myanmar, weekend poetry
Anonymous September 29, 2007 1:35 AM
#VeriDicto September 30, 2007 8:25 AM
Once there wasamorning when all munks were arrested, beaten and deported. Students were attacked by military men. People tortured and killed on the streets.
once the flame begins to catch, the wind will blow it higher
song by Peter Gabriël (2nd alinea)
tekst by vyrtis (1nd alinea-Dendermonde-Belgium)